Booliiska Soomaaliya oo bandow ku soo rogey magaalada Muqdisho – Radio Daljir
Booliiska Soomaaliya oo bandow ku soo rogey magaalada Muqdisho
Maajo 14, 2022 9:05 b 0
Afhayeenka booliiska Soomaaliya, Cabdulfataax Aadan Xasan, oo shir jaraa’id qabtey, ayaa sheegay in magaalada magaalada lagu soo rogey Bandow.
Sababta loo soo rogey bandowga, ayaa ah iney dhaceyso maalinta bari ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya, taasoo u baahan waa sida uu yiri afhayeenkuye in la adkeeyo ammaankeeda.
Afhayeenku wuxuu sheegay iney xanibeen dhammaan dhaq dhaqaaqyada kala duwan, marka laga reebo xaaladaha degdega ah, oo ay tahay dadku iney la xiriiraan ciidanka booliiska, si markaa ay u helaan fasax.
Bandowgani ayaa bilaabanaya caawa fiidkii, marka ay saacadu ku beegan tahay 09:00 fiidkii, iyadoo uu dhammaan doono sida uu sheegay afhayeenku 06:00 aroorta hore ee maalinta Isniinta, oo ay taariikhdu ku beegan tahay 16-ka bisha May, 2022-ka.
Dalalka Sweden iyo Finland oo la filayo inay ku biraan Nato cabsi ay ka qabaan Ruushka awgeed